5 Jan နံနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများစုစည်းမှု – Sports A2Z
5 Jan နံနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများစုစည်းမှု
-လီဗာပူးလ်နည်းပြ ယာဂင်ကလော့ပ်ဟာ ဆောက်သမ်တန်အသင်းအိမ်ကွင်းမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကို လက်မခံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ပုံရပြီး ပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မဆီမဆိုင် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း ၂ နှစ်အတွင်းရတဲ့ပင်နယ်တီက ၎င်းရဲ့အသင်း ၅ နှစ်ခွဲမှာရတာထက် ပိုများတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့။
-မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက ခေါ်ယူဖို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေခဲ့တဲ့ ဒေးဗစ်အလာဘာကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ လွဲချော်သွားခဲ့ပြီလို့ သိရပြီး Marca ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သြစတြီးယားလက်ရွေးစင်နောက်ခံကစားသမားဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရ။
-မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဂန္တဝင်နောက်ခံကစားသမား ဂယ်ရီနဗီးက အသင်းခေါင်းဆောင်ရာထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသင်းကို အံ့အားသင့်ဖွယ် ရလဒ်တွေကို ယူဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကို ခန့်အပ်သင့်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းရဲ့ညီဖြစ်သူ ဖီးလ်နဗီးက ပေါ်တူဂီကြယ်ပွင့်ဟာ ကွင်းအတွင်းမှာ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသင်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်နဲ့ တူတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့။
-မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေဟာ ဆောက်သမ်တန်အသင်းကို လီဗာပူးအသင်းက ၁-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် နည်းပြဆိုးလ်ရှားကို အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးကို တက်ရောက်ဖို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး လီဗာပူးအသင်း ခြေချော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့် အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးကို တက်ရောက်နိုင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်နေကြတာဖြစ်။
Utd squad tonight…. 👀😂 pic.twitter.com/hZQpLUHNiV
— Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 4, 2021
-မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဂန္တဝင် ရီယိုဖာဒီနန်က တနင်္လာနေ့ညနေက ဆောက်သမ်တန်ကို လီဗာပူးအသင်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကို ဝမ်းသာနေခဲ့တယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး အမှတ်ပေးဇယားဒုတိယနေရာက ၎င်းရဲ့အသင်းဟောင်းအတွက် အခွင့်ကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် တွစ်တာမှာ ယူနိုက်တက်အတွက် အောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့ ရုပ်အရှင်ပုံကို တင်ခဲ့။
-နာမည်ကျော်ဂျာနယ်လစ်ဖြစ်တဲ့ ဖက်ဘရီဇီယို ရိုမာနိုက အာဂျင်တီးနားနောက်ခံကစားသမား မားကို့စ်ရိုဟိုရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ ယုံကြည်နေပြီး ဘိုကာဂျူနီယာအသင်းဆီကနေ ကမ်းလှမ်းမှု အမှန်တကယ်ရရှိလာတဲ့အချိန်ကျရင် ထွက်ခွာခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့။
-ဥရုဂွေးဘောလုံးသမားများအစည်းအရုံး (AFU) က လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအဖြစ် မှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခံထားရတဲ့ ကာဗာနီရဲ့ (၃) ပွဲပယ် ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ဒဏ်ငွေပေါင်(၁)သိန်းကိစ္စကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ အဆိုပြုစာလွှာ(၁)စောင်ရေးသားပြီး အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို ပေးပို့ခဲ့ပြီး အက်ဖ်အေ အနေနဲ့ “ကမ္ဘာ့မျိုးနွယ်စုံလူမျိုးရေးအမြင်ကို လစ်လျူရှုထားပြီး ကာဗာနီမှာလည်း လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကို အားပေးအားမြှောက်ပြုတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး ဘယ်တုန်းကမှ ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးခြင်းမရှိလို့ ဖော်ပြခဲ့။
-မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှ အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ ပက်ဒရိုကို ခေါ်ယူချင်နေတာကြောင့် စပို့တင်းလစ္စဘွန်းပရိသတ်တွေဟာ ယူနိုက်တက်ကို လူမှုကွန်ရက်ကနေ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုလည်း အသင်းကနေ ဆွဲထုတ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့် ပက်ဒရိုကိုတော့ ဒီတိုင်းထားပေးပါလို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြ။
-လီဗာပူးလ္နည္းၿပ ယာဂင္ကေလာ့ပ္ဟာ ေဆာက္သမ္တန္အသင္းအိမ္ကြင္းမွာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္ကို လက္မခံနိုင္ျဖစ္ခဲ့ပုံရၿပီး ပြဲအၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ မဆီမဆိုင္ မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္အသင္း ၂ ႏွစ္အတြင္းရတဲ့ပင္နယ္တီက ၎ရဲ့အသင္း ၅ ႏွစ္ခြဲမွာရတာထက္ ပိုမ်ားတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့။
-မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္အသင္းက ေခၚယူဖို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနခဲ့တဲ့ ေဒးဗစ္အလာဘာကို ေခၚယူနိုင္ဖို႔ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ၿပီလို႔ သိရၿပီး Marca ရဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၾသစႀတီးယားလက္ေရြးစင္ေနာက္ခံကစားသမားဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ သိရ။
-မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ ဂႏၲဝင္ေနာက္ခံကစားသမား ဂယ္ရီနဗီးက အသင္းေခါင္းေဆာင္ရာထူးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသင္းကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ ရလဒ္ေတြကို ယူေဆာင္ေပးနိုင္ခဲ့တဲ့ ဘ႐ူနိုဖာနန္ဒက္စ္ကို ခန႔္အပ္သင့္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎ရဲ့ညီျဖစ္သူ ဖီးလ္နဗီးက ေပၚတူဂီၾကယ္ပြင့္ဟာ ကြင္းအတြင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အသင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္နဲ႔ တူတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့။
-မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ပရိသတ္ေတြဟာ ေဆာက္သမ္တန္အသင္းကို လီဗာပူးအသင္းက ၁-၀ နဲ႔ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နည္းျပဆိုးလ္ရွားကို အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆုံးကို တက္ေရာက္ဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လီဗာပူးအသင္း ေျခေခ်ာ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆုံးကို တက္ေရာက္နိုင္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတာျဖစ္။
-မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ဂႏၲဝင္ ရီယိုဖာဒီနန္က တနလၤာေန႔ညေနက ေဆာက္သမ္တန္ကို လီဗာပူးအသင္း ရႈံးနိမ့္ခဲ့တာကို ဝမ္းသာေနခဲ့တယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အမွတ္ေပးဇယားဒုတိယေနရာက ၎ရဲ့အသင္းေဟာင္းအတြက္ အခြင့္ေကာင္းကို ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ တြစ္တာမွာ ယူနိုက္တက္အတြက္ ေအာင္ပြဲခံတဲ့အေနနဲ႔ ႐ုပ္အရွင္ပုံကို တင္ခဲ့။
-နာမည္ေက်ာ္ဂ်ာနယ္လစ္ျဖစ္တဲ့ ဖက္ဘရီဇီယို ရိုမာနိုက အာဂ်င္တီးနားေနာက္ခံကစားသမား မားကို႔စ္ရိုဟိုရဲ့ အနာဂတ္ဟာ အိုးထရက္ဖို႔ဒ္မွာ လုံးဝမရွိေတာ့ဘူးလို႔ ယုံၾကည္ေနၿပီး ဘိုကာဂ်ဴနီယာအသင္းဆီကေန ကမ္းလွမ္းမႈ အမွန္တကယ္ရရွိလာတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ထြက္ခြာခြင့္ျပဳသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့။
-ဥ႐ုေဂြးေဘာလုံးသမားမ်ားအစည္းအ႐ုံး (AFU) က လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈအျဖစ္ မွားယြင္းစြာစြပ္စြဲခံထားရတဲ့ ကာဗာနီရဲ့ (၃) ပြဲပယ္ ျပစ္ဒဏ္နဲ႔ ဒဏ္ေငြေပါင္(၁)သိန္းကိစၥကို ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ အဆိုျပဳစာလႊာ(၁)ေစာင္ေရးသားၿပီး အဂၤလန္ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အက္ဖ္ေအ အေနနဲ႔ “ကမၻာ့မ်ိဳးႏြယ္စုံလူမ်ိဳးေရးအျမင္ကို လစ္လ်ဴရႈထားၿပီး ကာဗာနီမွာလည္း လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳး ဘယ္တုန္းကမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိလို႔ ေဖာ္ျပခဲ့။
-မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္အသင္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကမွ အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့ ပက္ဒရိုကို ေခၚယူခ်င္ေနတာေၾကာင့္ စပို႔တင္းလစၥဘြန္းပရိသတ္ေတြဟာ ယူနိုက္တက္ကို လူမႈကြန္ရက္ကေန ဘ႐ူနိုဖာနန္ဒက္စ္ကိုလည္း အသင္းကေန ဆြဲထုတ္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ပက္ဒရိုကိုေတာ့ ဒီတိုင္းထားေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက။
21 ကြိမ်မြောက် ဆုဖလားအတွက် No. 1 နေရာကို အပိုင်သိမ်းဖို့ အခွင့်အရေးရသွားတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားအများဆုံး ပိုင်ရှင်
5 Jan နံနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု